Akụkọ akuko - Shanghai Yangli Ngwongwo Ihe Co., Ltd.
Uzo ozo nke ulo oru YangLi, gbadoro aka na nkpuru nke kichin, oche ime ụlọ ịwụ, ngwa ụlọ. "Geriss" bụ n'ihi na elu-ọgwụgwụ zoro ezo slide, metal igbe usoro, European oge gboo ịlesụ na oge a ị whichụ nke na-enwe elu aha n'etiti furnitue ahịa.
Mmalite nke okike Geriss: "G" na - anọchite locomotive, dugara YangLi na ụwa, "R" na - anọchite Yang Liren, ndị Yang Li na - agbaso "nti na udo, Li Bo na elu nke" nkà ihe ọmụma azụmahịa, na-akwado udo, ịha nhata na ndụ, ntụkwasị obi nke onwe, ịdabere na onwe ya, iwusi onwe ya ike na mmụọ nke ihe ọhụrụ, iji mepụta ọmarịcha ndụ maka ndị ahịa, nwee nnukwu nsọpụrụ na oche ndị America, ụlọ ọrụ ngwa ngwa osisi.
Yanlgi si slide slide, damping mgbabere uzo, na oven ngwa na-zọọ na logo. The "Y" na YANGLI bụ maka nduru nke udo, ọ pụtara na Ylọ ọrụ Yangli na-eme ka mmadụ nwee nha anya, azụmahịa udo, na-asọpụrụ iwu na nkwekọrịta nkwekọrịta. Nwere ike ịfe efe. YANdị YANGLI guzobere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20, nke nwere mma dị elu, ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, nwee nnukwu nsọpụrụ na ụlọ ọrụ ndị na-ere ngwa ngwa Europe na America.
Brandlọ ọrụ nke atọ nke ụlọ ọrụ Yangli, lekwasịrị anya na sistemụ igwe, zoro ezo slides, bọl na-ebu slides, hinges etc. HIFEEL dị mkpụmkpụ maka "AKW QKWỌ AKWUKWỌ AKW QKWỌ". Pụtara na anyị na-agbasi mbọ ike ịmepụta ngwaahịa dị elu maka ndị ahịa anyị.